Amakhiwane sivale isihlobo Ficus zasendlini. Lesi sitshalo beza kithi, usuka kude emazweni ashisayo - India, Palestine. Kukhona izinhlobonhlobo 400 ezahlukene wamakhiwani.
Womkhiwane (owaziwa nangokuthi amakhiwane) akukhulunywa ndawo eBhayibhelini. Eqinisweni, njengoba kudala eGibhithe lasendulo, le yasezindongeni enhle yokubonisa ukuhlangana amakhiwane (iminyaka 2500 BC) zidaliwe. ayelapha amakhiwane atholakala ngaleso sikhathi - eGibhithe lasendulo, Arabia, Ancient Greece. Avicenna wanxusa ukuyisebenzisa ukuze aphathe isimungumungwana, umalaleveva ezinzima, kanye nazo zonke ezinye ukushisa komzimba, e induna, izimila, amathumba, izilonda, ugcunsula. Lokhu wakucabangela iwayini berry yokuvimbela jikelele, kanye izindlela ezinhle kakhulu Cosmetology. Kodwa inzuzo enkulu-ke ukuthi kuyinto elixir wangempela intsha okuphakade ukuba anakekele asebekhulile. Izazi zanamuhla ezikhonjwe njengengxenye ficin komkhiwane, okuyinto kuvimbela amahlule eziningi isandla "lihlanza" zonke zingcwecwe sclerotic kusukela kwezindonga engaphakathi imithambo yegazi.
Ukuze abasebenzi emisebenzini yokudala - izimbongi, abaqambi, babhali, bahlatiyi, abaculi kuyinto amakhiwane kubaluleke kakhulu. izakhiwo awusizo isithelo amandla nokuthuthukisa lokusungula. Vala ku-aspirin ikhemikhali likhona kulo, kubalulekile amafutha "abahlakazekile igazi", ngesikhathi yokumatisa ke umoya-mpilo. Omkhulu ukuba adle isithelo esisodwa ngosuku ngenyanga bese ukuthatha ikhefu ngoba ngenyanga.
Amakhiwane ocebile amavithamini B1, B2, B6. Uma sicabangela izithelo ezisanda kukhiwa, ziqukethe amaprotheni, ushukela, ascorbic acid, nosawoti potassium, i-magnesium, i-phosphorus, i-calcium, okusansimbi, i carotene, acid organic. Inani amandla idlula uqobo amakhiwane engavamile futhi omisiwe ithatha cishe yezindawo zokuqala phakathi izithelo nemifino kokuqukethwe amaminerali ewusizo.
I izakhiwo amakhiwane wendabuko imithi esetshenziselwa ukuqunjelwa okungamahlalakhona, kolwelwesi, ngoba kungcono igazi. Fig Jam, isiphuzo, umhluzi ifa antipyretic, diaphoretic futhi kuthinte nethonya elizuzisa e ukuvuvukala uqhoqhoqho amalaka, bronchus. Futhi-Armenian Folk imithi zisebenzisa amakhiwane. izakhiwo ewusizo a decoction amaqabunga ayo kuvele ukukhwehlela kanye nesifo sohudo. I Georgian Folk imithi decoction: amahlamvu Peach nembati ukusebenzisa nesifo nesihudo.
amakhiwane White empeleni eletha fun kuphela, kodwa akukho ayelapha awusebenzi ifa, kodwa ebumnyameni omnyama - ukuphulukiswa, uyasondla, ehlanza, acima ukoma, uthulisa, ukushayela umjuluko.
Amakhiwane libonisa izici ezibaluleke ekwelapheni ukuthambekela thromboses, izifo zenhliziyo, ukuntuleka kwegazi emzimbeni, ukucinana kwemigudu yokuphefumula, ukukhwehlela, isifuba somoya, ukukhwehlela whooping. Kuyinto isisu okuncane futhi laxative, elisetshenziswa nephritis.
Kubantu abaphethwe ukukhuluphala, umkhiwane bangaba umsizi esisemqoka kakhulu. Ngempela, fibre eziqukethwe amakhiwane e semali, kusiza ukunciphisa umzimba ngokushesha, uma udle izithelo njalo.
Amakhiwane futhi unothile phenol, i-omega-3 no-omega-6. Lokhu okuqukethwe - yiwona abasindisi mbamba letimayelana nalesihloko inhliziyo, bangakwazi ukusiza ukuvimbela isifo senhliziyo.
Kwegazi okubangelwa amazinga mncane impela sodium ne-potassium ezingeni elikhulu. Njengoba amakhiwane kuyinto impela eningi i-potassium ne-sodium incane, kuyasiza ukugwema nomfutho wegazi ophezulu.
Njengoba bekhula, abantu baqale ahlupheke ukonakala macular, okuvame ukuholela i nokushonelwa okungalindelekile mbono. Lokhu kusiza ukugwema amakhiwane.
umphimbo obuhlungu iphathwa kakhulu ngempumelelo amakhiwane ubisi hot yisiphepho, ngoba libhekene wokuqukethwe lelisetulu isikhwehlela. Nokho lesi sithelo emangalisayo kuthuthukisa impilo isibindi. Futhi njengoba ane-alikhali, ekubonisa nabantu ne-asidi eningi kakhulu, ngoba kwenza kube lula kujwayeleke pH.
Amakhiwane - izici ezibaluleke kwalo mkhiqizo likhulu kakhulu futhi ezidingekayo ukuze umuntu. Ngakho ningakwenqabi ithuba ukusebenzisa izithelo enjalo esihlwabusayo futhi ewusizo.
Ukusiza izingcweti abasha indlela yokwenza iphepha kusukela Tetrahedron
Tribe, ubuzwe, isizwe - yini lokho? Okuqukethwe imiqondo